You are here: Home / Xalalka Qaboojinta / Tiknoolajiga hore wuxuu ilaaliyaa Cuntada - Qaboojiyaha cawska
1 Xaaladda - Goynta Maanta Muuqaalada Maanta Maanta
2 Culeys - Ka dhig khudaarta Cusub Maalmo yar oo dheeraad ah oo aan laheyn koronto la'aan
Xaaladda - Goynta Maanta Muuqaalada Maanta Maanta
Awoodda korontada ee ka jirta beelaha woqooyiga ee waqooyiga, ma laha koronto aan jirin wax qaboojiye ah.
Xataa magaalooyinka iyo magaalooyinka korontada waa qalad.
Dadka saboolka ah badankoodu xitaa ma awoodaan inay qaboojiyaan qaboojiyaha.
Inta badan dadka ku nool beeraleyda, badankoodu waxay ku nool yihiin saboolnimada.
Bileysku waa qaab asaasi ah oo ka mid ah qaab-dhismeedka qoyska, dumarka, ku nool daamanka, waxay ku xayiraan guryahooda.
Dumarka ayaa si xun u liita marka la eego daryeelka caafimaadka, waxbarashada iyo fursadaha shaqada.
Gabdhaha yaryar ayaa si gaar ah loo naqshadeeyey, sababtoo ah waxaa lagu qasbay inay maalin kasta baxaan si ay ugu iibiyaan cunto si dhakhso ah u sii dara, si loogu daro dakhliga qoysaska yar.
Culeys - Ka dhig khudaarta Cusub Maalmo yar oo dheeraad ah oo aan laheyn koronto la'aan
Raadi farsamo farsamo oo aan u baahnayn in la helo tamar dibadeed
ilaalinta miro, qudaar iyo waxyaabo kale oo badan oo ku yaalla dabaasha, kuleylaha kuleylka ah.
nidaamka qaboojinta dheriga-dhejiska, nooc ka mid ah "qaboojiyaha cawska ah", ayaa ka caawiya beeralayda hoos-u-dhigga adigoo yareynaya cunto xumada iyo qashinka
waxay kordhisaa dakhligooda
waxay xaddidaa khataraha caafimaadka ee cunno xumida
Dheriga-dhejiga wuxuu ka kooban yahay labo dheryo dhar dhuxulayaal ah oo kala duwan oo dhexdhexaad ah, oo midka kale lagu rido. Meelaha u dhexeeya labadii dheriga ayaa lagu buuxiyey ciid qoyan oo si joogta ah u qoyan, si ay u ilaaliyaan labada dheriga. Miraha, khudradda iyo waxyaabaha kale sida cabitaanka fudud ayaa la gelinayaa dheriga hoose ee gudaha, kaas oo lagu daboolay maro qoyan.
Dheriga Dakhliga Tirakoobka
Abaabulihii ugu horeeyay ee abbaarta ee dheriga ku jira ayaa ku guulaystay:
ukunta, tusaale ahaan, waxay joogeen maalmo cusub 27 halkii 3
yaanyada iyo basbaaska ayaa u socday toddobaadyo XNUM ama ka badan
Isbaantiga Afrikan sida caadiga ah qalloocan maalin ka dib, weli waa la cuni karaa ka dib maalmaha 12 ee dheriga dheriga
Daawo - Dufan Daar Qaboojiyaha
Dhererka Tixraacyada Tijaabada
Maqaalkii hore - Rugta Shahaadada Rolex
Faahfaahin dheeraad ah - Wikipedia
Faahfaahin farsamo badan - Qaboojiyaha Zeer pot